Qaar ka mid ah golaha wasiirada Galmudug oo diiday Xil ka qaadista Madaxweyne Caalin – SBC
Qaar ka mid ah golaha wasiirada Galmudug oo diiday Xil ka qaadista Madaxweyne Caalin
Qaar ka mid ah golaha wasiirada maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqay in ay aheyd wax aan jirin hadalkii ka soo yeeray gudoomiyaha Baarlamanka Maamulkaasi oo ku aadanaa in Baarlamanka Galmudug ay xilkii ka qaadeen Madaxweyne Caalinta Maamulkaasi.
Waxa ay intaasi raaciyeen xubnahani ka tirsan Golaha wasiirada Galmudug in Madaxweynuhu uu sii wadankaro Shaqadiisa islamarkaana aan loo dhameyn xil ka qadista lagu sameeyay oo in ka yar 14 xubnood oo ka tirsan Baarlamanka ay ku dhawaaqeen xilka qaadistiisa .
Wasiir ku xigeenka wasaarada Arimaha gudaha iyo Amniga Ahna Afhayeenka Maamul goboleedka Galmudg Axmed Baasto ayaa u sheegay Saxaafada in ay been abuurtahay waxyaabihii la soo dhoo dhoobay ee ay ku dhawaaqeen xubno sare oo ka tirsan Baarlamanka Galmudug.
Waxaanu Intaasi Raaciyay in Madaxweynaha Galmudugi aan jirin wax iminka xilka loogaga qaadi karo maadaama uu sheegay in uu wax weyn ka qabtay dalka islamarkaana maalmo un ka hor ay aheyd markii uu shacabweynaha Galmudug hortooda kaga dhawaaqay in dalka la geliyo xaalad deg deg ah Si meel loogu ogaado xaalada Amaanka gobolka.
Sikastaba ha ahaatee Madaxweynaha Galmudug ayaa waxa uu dhankiisa isla markii ay so bexeen hadalada lagu shaacinayo in xilka laga qaaday in uu arinkaasi waxba ka ogeyn islamarkaana ay soo dhoo dhoobteen xubno ka tirsan baarlamanka xukuumada oo uu ugu horeeyo gudoomiyaha Baarlamanka,
Waxaa soconaya saacadihii ugu dambeeyay gudaha Galmudug dhaq dhaqaaqyo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafaadyadan horta leh ee ka soo ifbaxaya goleyaasha Galmudug iyo Madaxdooda sar sare.
Diseenbar 2, 2011 at 3:23 pm
dhamaan dadka dagan gobalka mudug waa u wanaagsan inay meel uga soo wada jeestaan kuwa dadka walalaha isku diraya